mpandray anjara amin`ny fifaninanana an-kira The Voice, dia nambara fa zafikelin'i Andrianaivo Ravelona, mpanao hosodoko izy mianadahy, kanefa tsy misy hifandraisany. Diso io filazana io fa zafikelin`ilay mpanao hosodoko monina any Frantsa, HAZZAVANA, izy mianadahy ireto ary Holisoa ny renin’izy ireo izay zanany vavy. Nanitsy io hadisoana io moa i HAZZAVANA.
FANENDAHANA TENY ANKORAHOTRA
Amin’ny andro atoandrobenanahary no nosintonina imasom-bahoaka tao anaty fiarany ny mpamily iray. Izy naka aina tsara teo amoron-dàlana no novohain’ireo telo lahy ranjanana ny fiarany ary nobataina toy ny zazakely ilay rangahy. Nosintonina avokoa izay rehetra azo nalaina teny aminy. Ny finday no lasa voalohany. Tetsy anoloan’ny fivondronana etsy Ankorahotra no nitranga izany omaly ary nigagan’olona tanteraka.
TRANO NIRODANA NAHAFATY ZAZA
Nirodana ny trano Ntaolo tetsy Arivonimamo ary nahafaty olona roa. Zazakely enin-taona sy valo taona izay mpirahavavy niray fandriana ireo namoy ny ainy ireo. Ny renin’ireo sy ny zazakely iray hafa izay anadahin’izy roa vavy dia sendra mba tao amin’ny faritra izay tsy tratran’ny fihotsahana. Na izany aza naratra mafy ireo ary naharitra adim-pamataranandro iray vao tafavoaka tao anatin’ny trano nihotsaka. Ny olona no nifandrimbona hatramin’ny farany na tamin’ny famoahana ny maty na ny velona.
Tamin’iny volana febroary lasa teo iny no tena betsaka ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga teto an-drenivohitra. Raha ny tarehimarika navoakan’ny borigadin’ny lozam-pifamoivoizana etsy Tsaralalàna dia nahatratra 47 izany ka nahafaty olona roa. Nisy ny olona enina izay nidoboka am-ponja tamin’ireo izay natolotra ny fampanoavana. Nisongadina koa fa betsaka tamin’ireo mpamily ny mamo. Nisy 31 isa nosamborina vokatr’izany, tamin’ny volana febroary hatrany.
Nandritry ny fankalazana ny andron’ny fampianarana mihitsy no nanapa-kevitra ny nanolana mpianatra ny tsy mataho-tody iray tao Vohipeno. Ny iray zazavavy 13 taona ary ny faharoa 16 taona. Tsy namelan’ny polisy tao an-toerana raha tsy voasambotra ity olon-dratsy ity. Notambatambaziny ireo zazavavy ary nentiny teny amin’ny maizimaizina. Tsy nanaiky ny ray aman-dreny raha tsy nitory hatramin’ny farany. Tao anatin’ny fety no nanadalany ireo zaza.
Natsikafon’ny JIRAMA ary notononiny mihitsy ireo tena mpangalatra herinaratra eto an-drenivohitra. Ireo hotely lehibe na an’ny karàna na an’ny gasy mpanankarena, raha araka ny tatitra no tena tsy nandoa mihitsy. Efa misy tafiakatra ana miliara ariary ny tentim-bidin’ny halatra jiro izay nataon’ny iray amin’ireo fotsiny. Misy koa ny hotely lehibe iray izay an’ny filoham-pirenena teo aloha izay voakasik’ity fitoriana ataon’ny Jirama ity.
In-droa voatafika tamin’ny basy ny tokantrano iray tao Ambovombe-Androy tao anatin’ny alina iray. Nanana basy ny raim-pianakaviana ka nahavita nampiasa izany tamin’ny voalohany nahatongavan’ireo jiolahy izay rifatra nitsoaka. Akory ny hagagana fa dia niverina indray ireo tamin’iny alina iny ary tena nifampitifitra ny roa tonta. Samy voan’ny bala izy mivady kanefa kosa rifatra nitsoaka ihany ireo olon-dratsy rehefa tena hitany fa sahy maty ilay rangahy.